Miyaad ka qayb qaadatay a Taleeshinka Twitter goor dhow? Haddienasan ahayn, maxaa kaa celinaya?
WHSR waxay bilowday adeegeena ishtag ee ‘WHSRnetChat’, waxaanay gaarsiisaa kuwa bloggers, saavadyeyaasha, shakhsiyaadka, sumcada, ururada, iwm. Si tu esi ururiyaan ra’yigooda iyo jawaabcelinta mawduucyada la xiriira blogga.
Waxaan bilawnay ololahan doodan Twitter-ka ah ujeedka – tas ir jums caawiyaan akhristeyaasheena inay dhisaan blog wanaagsan.
2.4 Qaar kāpostu vasks
2.7 3. Kulankana
2016 waxay sii wadaa inay noqoto sanad adag oo loogu talagalay warshadaha blogošana. Iyadoo la raacayo tilmaamaha cusub ee Google sida ugu wanaagsan ee loo raadin lahaa baaritaannada, emuāru autori ayaa la filayaa in ay shaqo adag ku qabtaan si ay u gaaraan heer sare.
Mid ka mid ah qaybta muhiimka ah waa baahida loo qabo in lagu daro heer sax ah oo awoodeed oo ku saabsan mawduuca.
Barta blogku waa in diirada saaraan bixinta maadooyin wanaagsan oo vasks ku ool ah oo akhristayaasha. Ereyada kāposti, blogeri ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay sameeyaan cilmi baaris iyo qoraa dheer oo posts.
– Dienas gultā (@Daysinbed) 2016. gada 10. janvārī Janaayo
– Angija Sudraba (@SilverSpoonLDN) Janaayo, 2016. gada 19. janvāris
– Fugogaraam iyo Muuqaal (@fuggsandfoach), 2016. gada 7. feb
Dhowr ka mid ah kaqaybgalayaasheena Twitter-ga ayaa soo jeediyay isweydaarsi iyo shaqooyin adag oo ah fureka aasaasiga ah ee lagu kordhinayo blog.
Waxaan u maleynayaa joogtayntu marwalba muhiim tahay. Anšaks ahaan, diiradda, boostada & warbaahinta bulshada. #bloggingtips # sheygaaga #WHSRnetChat
– Waxaad Ilmahayga Hooyo (@YouBabyMeMummy) Janaayo 10, 2016
Ku sii vate! Noqo mid joogta ah oo aan ka baqin inaad la wadaagto qof walba!
– Kristīna Nikolsone (@MediaMaven_CN) Janaayo, 2016. gada 11. gads
Tonis wuxuu ka soo baxayaa bogagga wuxuuna kugu xirayaa akhristayaasha. Markaad u dhowdahay inaad dhagaystayaashaada ku dhageysato, waxa fiican inaad fahamsan tahay waxa ay raadinayaan iyo waa hab lagu fili karo si aad u korto blogkaaga, sidoo kale!
– Nolosha Qoyska oo ka weyn (@largerfamily) Janaayo, 2016. Gada 15
Dhawaan, Jerry @WebHostingJerry, ayuu qoray boostada martida ee Problogger si uu kaaga caawiyo inaad sii wadato hawlaha blogging. Iska hubi kuwan 5 xeeladaha blogošana wuxuu ku qeexayaa 2016.
U firfircoon shabakadaha bulshada si aad vasks qabtaan dhagaystayaashaada
Ku vaļā shaqo adag oo sii wad
Waa la wada ogyahay emuārā – wuxuu leeyahay habdhaqan novērtle ah oo jilicsan.
– Waxaad Ilmahayga Hooyo (@YouBabyMeMummy) 2016. gada 23. marts
Buferis iyo HootSuite waa kuwa aan isticmaalo inta badan.
– Ku-xirida Mummey (@AttachmentMumma) 19 Maarso 2016
Tētis badan ayaa jira, Buffer, Hootsuite iwm 🙂
– Harleena Singh (@harleenas) Maarso, 2016. gada 28. janvāris
Haddii aad u baahatid xoogaa hacks dhaqso ah, waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato marka aad isticmaaleyso.
Waxaad xisaabin kartaa dhammaan xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada hal meel isla markaana jadwalkaaga ku qor. Hootsuite ha ka shaqeeyaan goorta ir tik ļoti labs. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad kaydiso mashaakilaadka waxtar leh si dib loogu isticmaalo dambe.
Bakhtiintu waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku darto RSS feed si aad u hesho boggaga bulshada oo aad si toos ah ugula wadaagto boggaaga. Waxa kāposti oo aad wanaajin kartaa taariikhdaada la soo dhajiyay oo leh waqti-gaaban si loo Abuuro jadwal dib-loo-qaabeyn ah.
Qaar kāpostu vasks
hiya, Waxaan un isticmaalaa Social Oomph iyo Tweetdeck laakiin aalad uma adeegsano Facebook.
– Vicky Charles (@SingleMAhoy) 7 Maarso 2016
Waxaan jeclahay Buffer, JustRetweet iyo Manageflitter. (Kaliya waxaan isticmaalaa agabyada maamulka ee Twitter) 🙂 #WHSRnetchat #warbaahinta bulshada
– Džaspers (@OpportunityTM) 28 Maarso 2016
– Stefānija Beklija (@eatleepchic_ie) 25 Maarso 2016
Shabakad internetka oo awood leh oo kugu caawisa inaad ku koro khadkaaga Twitter iyo Instagram. Laga soo bilaabo website-ka, waxaad arki kartaa cidda ku hawlaneyd koontadaada. Waxa kale oo ir kaa caawineysaa inaad hesho dadka isticmaala munaasabadaha soo socda.
Waa qalab aad u maareyn kartida Twitter and kor loogu qaado ka qaybgalka iyo abuurista raadoyinka imaan kara. Waxaad la socon kartaa dhammaan isdhexgalkaaga muhiimka ah ee beeshaada gudaheeda. Waxa ugu fiicani waa, waxaad sameyn kartaa oo kobcin kartaa ololeyaal kala duwan sida jadwalkaaga gaarka ah.
Waa sahlan tahay in la isticmaalo. Kaliya cusbooneysii cusbooneysiinnanda maktabada oo samee jadwalka boostada. Edger wuxuu isticmaali doonaa cusbooneysiinta maktabada si uu u abuuro saf. Qaybta ugu fiican waa, waxay "automātiski" u buuxin doontaa oo buuxin doontaa lafteeda iyo cusbooneysiinnadaada ma aha inay qashinayaan.
Iyada oo ku xiran tahay niša, waxaad u maleyn kartaa shabakadaha aan caadi ahayn in the gaaraan dhagaystayaashaada.
Ka dhigashada lacagta laga helo bloggajā bija jūtama, lai redzētu, vai ir citarsan internetka. Marka aad eegto isbedelka raadinta Google, waa mid ka mid ah ereyada ugu caansan ee waqtiga oo dhan.
Bishii Janaayo 2016, Pat Flynn oo ka socota Dakhliga Dakhliga Gaarka ah $ 106.492.27. Waxa uu samaynayaa (ku dhawaad) sida ugu yar ee shirkadda yar ee shirkadda liiska.
Si: # 1 Guryaha Shirkadda tooska ah, # 2 Heshiisyada Heshiiska La Wadaago # 3 Amazon filiāle, # 4 Adsense / Media.net.
– Eņģelis Balichowski (@Angelcbali), 2016. gada 18. aprīlis
Isticmaal bartaada sida qalab suuq ah oo soo jiidanaya si aad u soo jiidatid runta, bixiya macaamiisha adeegyada caadiga ah, ee soo noqnoqda.
Gael Breton oo ka socda Hay’adda Hacker ayaa falanqeeyay sida emuāru autori ir lacag uga helaan barta iyo waxay la yimaadeen qaybaha waaweyn ee 3 halkaasoo lacagta ay ka timaaddo (oo u muuqata mid u muuqata mid sahlan).
Avots: Maamulka hakeris
Tētis badan oo blogeri ah ayaa lacag badan ku sameeya internetka. Waa la qaban karaa.
Qaado tallaabo oo vasks ka baro farsamada wadada.
Tani waa WHSR Twitter-ka soo-celinta sheekeysiga #WHSRnetChat. Waxaan rajeynayaa in aa faa’iido kuu tahay.
@sherisaid, @rozkwalker, @michelotta, @ 30ishblogging, @cucumbertown, @ cre8d, @ mousefashion95, @KintsugiOfLife, @aannadobreva, @SalmaDinani, @kevvieguy, @ DeepaliBhatt4, @theresamorhil, @ friends, Britu, @BeaverBuker, @BeaverBuker, @BeaverBuver, @BeaverBuker , @ thejfoster42, @HoylesFitness, @ ImRose1, @ElleAyEsse, @MikeSMcDonald, @WebpresenceUK, @INNOVEXco, @B_Grimaldi, @shyvish, @mzoptimism, @UwanaWhat, @ikechiawaze, @MinucaEce, @MinucaEistre, bloghandsseo